Miaro ny tanana tsy ho simban’ny “gel hydroalcoolique”
Lasibatra amin’ny singa maherisetra ao anatin’ireny “gel” fanasana tanana ampiasaintsika matetika be ao anatin’izao ady amin’ny Coronavirus izao ny hoditra.
Ranona persily, mampihintsana ny “points noirs”
Tsy voatery hopotserina foana ireo teboteboka maintimainty kely eo amin’ny tarehinao ireo vao ho afaka. Azo atao tsara ny manala azy ireo amin’ny alalan’ny fomba tsotra sy natoraly kanefa tena mahomby isan’andro.
Hodim-boasarimakirana : manala ny havizanan'ny tarehy
Hita soritra eo amin'ny tarehy ny havizanana. Tandremo anefa fa raha tsy voakolo izay tarehy misy taratry ny havizanana izay dia ho sarotra esorina tanteraka na ho raiki-tampisaka ao.
Fahazarana 5 miantoka ny hatsarana
Fahazarana tsotra dia efa mikolo ny endrika amam-bika sahady. Isan’ny tsy azo atao ambanin-javatra, ireto torohevitra 5 entina aminao ireto ary tokony ampiharina foana amin’ny fiainana andavanandro.
Maska natoraly mamotsy tarehy vetivety…
Mifaramparana ny herinandro, fotoana azo hararaotina tsara hikoloana ny endrika. Ity atoronay anao ity dia azonao hampiharina tsara amin'ity faran'ny herinandro ity : maska mamotsy tarehy amin'ny alalan'ny akora natoraly, tsy misy singa simika.
ASTUCES Akora natoraly, mahasolo "produits de beauté" lafo vidy
Fotoana fanararaotana hikolokoana ny endrika amam-bika tsara izao fotoanan’ny fijanonana ao an-trano izao.
BEAUTE “Lait démaquillant” amin’ny voatabia, vita ao an-trano !
Azo hanamboarana “lait demaquillant” natoraly vita ao an-trano tokoa ny voatabia.